KSM ဂလိုဘယ် -
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအထူးဆန်းဆုံးဥပဒေ ၁၀ ခု
စက်တင်ဘာလ 19, 2020 စက်တင်ဘာလ 19, 2020 admin ရဲ့
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည်စိတ်ကောင်းသောလမ်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်အတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများလိုအပ်သည်။ သို့သော်နိုင်ငံအနည်းငယ်သည်ဥပဒေများပြforming္ဌာန်းခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ လုံး ၀ ထူးခြားသည့်ဥပဒေများကိုဖန်တီးကြသည်! ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဥပဒေအချို့သည်အလွန်ထူးဆန်းသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုနားလည်ရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ အကြိမ်အနည်းငယ် […]
စက်တင်ဘာလ 14, 2020 စက်တင်ဘာလ 14, 2020 admin ရဲ့1 မှတ်ချက် တိရိစ္ဆာန်များအားဖြင့်ကြီးပြင်းခဲ့ကြသူ 10 ကလေးများအပေါ်
သငျသညျတိရိစ္ဆာန်တို့ကကြီးပြင်းခဲ့ကြသောကလေးများနှင့်မတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းသူတို့အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်။ ထိုကလေးများကို“ ရိုင်းစိုင်းသောကလေးများ” ဟုခေါ်ကြသည်။ ဒီကလေးတွေနောက်ကွယ်ကသိပ္ပံပညာကသူတို့ဟာအစကတည်းကခွဲထုတ်ထားတာပါ။ သူတို့သည်တောရိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးပြင်းလာကြရာတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များသည်သူတို့ကိုဂရုစိုက်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်တစ် ဦး [... ] ရှိပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 12, 2020 စက်တင်ဘာလ 12, 2020 admin ရဲ့1 မှတ်ချက် ဘာကြောင့်ဂျပန်ရှိအိမ်ထောင်သည်များအတူတကွအိပ်မပျော်တာလဲ
သင်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရလာသည်နှင့်အမျှသင့်ပါးစပ်နှင့်ထူထပ်သောအရာတိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်နီးနီးကပ်ကပ်နေလိုသည်။ သို့သော်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မူလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ရှိအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများသည်သီးခြားအိပ်နေကြသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အိမ်များသည်သေးငယ်ပြီးကုတင်များသည်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုသက်သောင့်သက်သာရှိကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနွေးထွေးသောလေထုပင်လျှင် […]
စက်တင်ဘာလ 6, 2020 စက်တင်ဘာလ 6, 2020 admin ရဲ့
ငါးတွေအကြောင်းစဉ်းစားရင်းမင်းသတိရမိတာကဘာလဲ။ ရေလား မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်၊ ရေမရှိရင်ငါးမရှင်သန်နိုင်ဘူးလို့ငါတို့ထင်တယ် ရေသည်ငါးမျိုးစုံ၏အဓိကကျက်စားရာနေရာဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်သည်ကွဲပြားခြားနားပြီးသင့်စိတ်ကိုပျောက်သွားစေနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဘုရားသခင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ် ၁၀ လုံး
စက်တင်ဘာလ 2, 2020 စက်တင်ဘာလ 2, 2020 admin ရဲ့1 မှတ်ချက် ကမ္ဘာပေါ်မှာပုံမှန်မဟုတ်သောအိမ်ဆယ်အိမ်ပေါ်မှာ
အိမ်အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံစံဖြင့်အိမ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်အခွင့်အာဏာရရှိသောအခါအိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာသည်နှင့်တူသည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်လူတို့သည်တဲများမှဂူများသို့ရဲတိုက်များသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ! သို့သော်လူအများပိုမိုတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဗေဒနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုတွေ့မြင်ရသည်။
လျှို့ဝှက်ချက်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာတက်ရောက်သူ ၁၀ ယောက်ကသင့်ကိုဘယ်တော့မှပြောပြမည်မဟုတ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 1, 2020 စက်တင်ဘာလ 1, 2020 admin ရဲ့1 မှတ်ချက် လျှို့ဝှက်ချက် ၁၀ ခုပျံသန်းမှုဆိုင်ရာတက်ရောက်သူများသည်သင့်အားမည်သည့်အခါမျှပြောပြမည်မဟုတ်ပါ
သင်သည်ပုံမှန်ခရီးသွားသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကလေယာဉ်အမှုထမ်းများပုန်းရှောင်လေ့ရှိသောအရာများကိုရှာဖွေရန်သင်အလွန်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုလှလှပပလျှို့ဝှက်ထားသဖြင့်သင်သည်သူတို့အားဖွင့်ဟရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လေယာဉ်ပေါ်သို့ရောက်သောအခါဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုပိတ်ခြင်း၊ စွဲစေခြင်းကဲ့သို့သော SOP များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ရန်အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ
သြဂုတ်လ 28, 2020 သြဂုတ်လ 28, 2020 admin ရဲ့
ပျော်ရွှင်နေခြင်းသည်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိနေထိုင်သောတိုင်းပြည်ကအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတွင်ရှိနေပြီးအပြုသဘောဆောင်သောဝန်းရံထားသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုအလျောက်ပျော်ရွှင်ပြီးကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုဖြစ်လာသည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ထင်ရှားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုယနေ့ KSM ၌သိရှိခြင်း […]
ကမ္ဘာတဝှမ်းမှအထူးဆန်းဆုံးအစဉ်အလာ ၁၀ ခု
သြဂုတ်လ 25, 2020 အောက်တိုဘာလ 3, 2020 admin ရဲ့
ကျနော်တို့အရူး, အရူးကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ငါတို့ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါတို့စိတ်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးပြီးတစ်မိနစ်လောက်စဉ်းစားမိစေသည့်ထူးခြားသောအရာများသတိပြုမိသည်။ ထိုနည်းတူစွာကမ္ဘာအနှံ့အပြား၌ကျွန်ုပ်တို့သည်လူအများစုအတွက်အဆင်ပြေသည်ဟုထင်ရသော်လည်း […] အတွက်ထူးခြားသောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမည့်ထူးဆန်းသည့်အစဉ်အလာများနှင့်တန်ဖိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်
သြဂုတ်လ 22, 2020 သြဂုတ်လ 22, 2020 admin ရဲ့
တိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုမိသားစုဟုမယူမှတ်ပါ။ တိရစ္ဆာန်အနည်းငယ်သည်အခြားတိရိစ္ဆာန်အချို့၏မျက်လုံးကိုပင်မကြိုက်ကြပါ။ အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်အခြားလူသားအနည်းငယ်ကိုမုန်းတီးကြသည်။ အလားတူပင်တိရိစ္ဆာန်များသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်အချို့ကိုလည်းမုန်းတီးကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတိရိစ္ဆာန်များသည် […]
သြဂုတ်လ 14, 2020 သြဂုတ်လ 14, 2020 admin ရဲ့
ကျွန်ုပ်တို့သည်လကိုပြင်းထန်သော၊ သိလိုစိတ်ပြင်းစွာဖြင့်ကြည့်နေသည်မှာ၎င်းသည်ညအမှောင်ထုထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကိုထွန်းလင်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မွန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤအချက်ကိုသတိမပြုမိစေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအရလှုံ့ဆော်ပေးသောအထူးသံသရာများကိုဖန်တီးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလူတိုင်းမယုံကြည်နိုင်ပါ။
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးတံတား ၁၀ ခု
သြဂုတ်လ 11, 2020 သြဂုတ်လ 11, 2020 admin ရဲ့
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရှည်ဆုံးတံတားများကိုတစ်နေရာတည်း၌စုရုံးခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာတံတားအရှည်ကိုတိုင်းတာရန်တိကျသောနည်းလမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် shoreline မှ shoreline သို့တိုင်းတာသောတံတားအနည်းငယ်နှင့်တံတားအနည်းငယ်တို့သည် entry point မှ […] အထိတိုင်းတာသည်။
သြဂုတ်လ 9, 2020 သြဂုတ်လ 9, 2020 admin ရဲ့
တခါတရံလူတို့၏ဆူညံသံများမှဝေးရာသို့ထွက်ခွာသွားခြင်းသည်တကယ်ကောင်းပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်သီးခြားနေရာတွင်အချိန်ဖြုန်းနေသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အချိန်အတော်ကြာနွေးထွေးစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာမြေမှာရှိတဲ့သီးခြားရပ်ကွက်တွေဆီကိုသွားဖို့လိုတယ်။ […]
| အဓိကအကြောင်းအရာ - News Portal နက်နဲသောအရာဖြစ်စဉ်များ.